Fampiharana Android: hevitra, famoahana vaovao, maimaim-poana ary maro hafa! | Androidsis (Pejy 11)
Ahoana ny fomba hanajanonana ny fampisehoana video amin'ny YouTube
Ny fanafoanana ny filalaovana mivantana ny horonan-tsary ao amin'ny fampiharana YouTube ho an'ny Android dia dingana iray tena tsotra ary hialantsika amin'ny fandaniam-poana ny angon-drakitra avy amin'ny salanisa.
Ahoana ny fomba hanovana ny Android ho iPhone X
Tutorial video izay asehoko anao ny fomba hanovana ny Android ho iPhone X, na dia milamina aza fa tsy hahavery Android isika satria amin'ny endrika ivelany ihany izany rehetra izany.
Ny tantaran'ny fanovana ataonay izay fampiharana izay manisy soa anay dia azon'ny rehetra ampiasaina
Ireo fanovana samihafa azonay natao momba ny rindranasa iray dia efa azo ampahibemaso, rehefa nafenina tamin'ny besinimaro izy ireo.
Ahoana ny fametrahana ny fakantsary Nokia amin'ny Android rehetra
Tutorial video izay asehoko anao ny fomba fametrahana ny fakantsary Nokia amin'ny Android rehetra. Ny fakantsary Nokia vaovao misy safidy tena mahaliana toy ny fakan-tsary roa na ny maody PRO.
Google Play dia manakana ireo fampiharana izay mandiso ireo antontan-taratasy
Google Play dia manakana ireo rindranasa ireo hanadino ireo antontan-taratasy. Fantaro misimisy kokoa ny fanapahan-kevitry ny fivarotana hanakana ireo fampiharana rehetra izay manampy amin'ny fanidiana antontan-taratasy.
Ahoana no fomba hamoronana ny sticker anao manokana amin'ny fomba tena tsotra
Tutorial video azo ampiharina izay anehoako anao ny fomba tsotra sy mahafinaritra indrindra hamoronana petadrindrina manokana hampiasanao amin'ny tambajotran-tseraseranao na amin'izay toerana tianao.
Samsung Pay sy PayPal manomboka miditra ao Etazonia
Samsung Pay sy PayPal dia tafiditra ao Etazonia. Fantaro bebe kokoa momba ny fampidirana ireo fampiharana roa herintaona aorian'ny fanambarana.
Tamin'ny 24 aprily, ny orinasan-kira mozika Suède dia afaka nanolotra fitaovana vaovao hahafahany mankafy ny serivisy mozika mivantana ao anaty fiaranay.
Mamitaka hivoaka bebe kokoa amin'ny YouTube amin'ny Android. Jereo ireo fikafika mamela anao hampiasa tsara kokoa ny fampiharana malaza.
Fampiharana Android tsara indrindra hijerena antontan-taratasy. Fantaro misimisy kokoa momba ireo rindranasa ireo izay hahafahantsika manadihady antontan-taratasy amin'ny finday Android mora foana.
Fahazoana Android: ny fampiharana sy lalao 24 tsara indrindra araka ny Google
Fahazoana Android: ny lalao 24 sy fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ny lisitra karakarain'i Google izay ny lalao sy ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android no voafidy hatreto amin'ity taona ity.
Fampiharana rindrambaiko tsara indrindra ho an'ny efijery AMOLED
Fampiharana rindrambaiko ho an'ny telefaona AMOLED. Jereo ity safidin'ireo rindranasa ho an'ny Android natao ho an'ny mpampiasa amin'ny telefaona misy efijery AMOLED ity.
Ny fanavaozana WhatsApp manaraka dia hahafahantsika mamerina rohy YouTube ao anatin'ilay fampiharana nefa tsy mila mampiasa ny app YouTube na ny browser.
Ny APP tsara indrindra hitantanana fampiharana
Raha mpampiasa mampiditra, manaisotra na mizara rindranasa marobe ianao, ny paositra video itondrako anao anio dia ...
Hodinihinay tsara ny PlayMX vaovao ary hametahana rohy handefasana ny MasDeDe APK izay misy ao amin'ny Google Play Store izao.
Mahavariana, maivana, haingana, tranonkala fanakanana tranonkala miaraka amina endri-javatra mahafinaritra be dia be
Lahatsary an-tsary izay anehoako anao ny tranonkala iray tsy mampino, haingana, maivana, miaraka amin'ny fanakanana doka tena mahomby ary miaraka amin'ireo safidy mahaliana toy ny fakana pikantsary misy pejy Web feno.
Snapchat izao dia mamela antso video miaraka amin'ny olona 16 aorian'ny fanavaozana farany
Ny rindrambaiko Snapchat dia navaozina ary nanampy fiasa vaovao mahaliana ho an'ny vondrona namana izay mampiasa ity sehatra ity: antso an-tsary hatramin'ny 16 ny olona.
Widget famantaranandro maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Android
Mamaly ireo fangatahana maro tonga taminay tamin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra sy ny tambajotra sosialy, anio dia entiko aminareo izay ho ahy anio no widget tsara famantaranandro maimaim-poana ho an'ny Android.
Ahoana ny fomba hanahafana ny fiasan'ny Edge an'ny terminal Samsung amin'ny Android rehetra
Lahatsary horonantsary izay asehonay aminao ny fomba fanahafana ny fiasan'ny Edge an'ny terminal Samsung amin'ny karazana terminal Android.
Ahoana ny fametrahana fampandrenesana avy amin'ny Samsung Galaxy S9 amin'ny Android rehetra
horonan-tsary momba ny lesona izay hazavaiko momba ny fananana ny fampandrenesana momba ny Samsung Galaxy S9 amin'ny Android rehetra fa tsy mila miorim-paka na manaraka tutorial mamirapiratra na zavatra hafa toa izany.
Google Play dia hampiseho aminao ny lazan'ireo fampiharana
Google Play dia mampiseho ny lazan'ireo fampiharana. Fantaro misimisy kokoa momba io fanovana io izay efa tonga tao amin'ny magazay fampiharana Android, izay mampiseho amintsika ankehitriny ny maha-malaza ny fampiharana.
Nanova ny fampandrenesana ny WhatsApp noho ny fiovan'ny nomeraon-telefaona. Fantaro misimisy kokoa momba ny fanovana natolotry ny fampiharana amin'ity fanamarihana ity izay manome fahafaha-manao bebe kokoa ho an'ireo mpampiasa.
Ny fampiharana famolavolana sary tsara indrindra efatra ho an'ny Android. Fantaro bebe kokoa momba ireo rindranasa ireo izay hanampy anao raha liana amin'ny famolavolana sary ianao.
Ny fampiharana tsara indrindra hijerena DTT amin'ny findainao miaraka amin'ny fanohanan'ny Chromecast. (DTT maimaim-poana, Radio sy gazety)
Fampiharana mampihetsi-po hijerena DTT amin'ny findainao na handefasana atiny amin'ny fahitalavitra mifandray aminao amin'ny alàlan'ny Chromecast. Fampiharana iray manontolo ahafahanao mijery fahitalavitra, mihaino radio Espaniola ary maharaka ny vaovao amin'ny famakiana maimaimpoana ny gazety Espaniôla.
Raha mifanaraka amin'ny lalàna eropeana, ireo tovolahy ao amin'ny Google dia nanitatra ny fotoana fiverenany ho an'ny fampiharana na lalao izay novidianay teo aloha.
Google Maps dia manampy fanampiana amin'ny fiteny vaovao 39
Ny serivisy Google Maps, izay vao nanitatra ireo fiteny misy azy, dia nitarina 39.
Manatsara ny fiainanao manokana ny Facebook aorian'ny tantara ratsy
Facebook dia manolotra fanatsarana ny toe-javatra miafina. Fantaro bebe kokoa momba ny fanovana tonga amin'ny tambajotra sosialy izay tsy maharesy lahatra ny mpampiasa na ny manam-pahaizana.
Google Play Film & TV dia mifangaro amin'ny serivisy streaming hafa
Google Play Film & TV dia mifangaro amin'ny serivisy streaming hafa. Fantaro bebe kokoa momba ny fanapaha-kevitr'i Google hampiditra ny rindranasa amin'ireo serivisy streaming maro any Etazonia.
Ny browser an'ny Microsoft, Edge, dia tonga teo amin'ny takelaka Android, na dia mbola eo am-piandohan'ny dingana fampandrosoana aza izy ary tsy ny safidy rehetra atolotray antsika amin'ny kinova farany no aseho.
Ny fampiharana an'ny Facebook rehetra amin'ny Android
Ny rindranasa rehetra ananan'ny Facebook ho an'ny Android. Jereo ny rindranasa rehetra azo alaina ao amin'ny Play Store izay an'ny Facebook.
Hampiasa fahana ara-potoana indray ny Instagram
Instagram dia hamerina mandahatra ny laharana araka ny filaharany. Fantaro misimisy kokoa momba ny fanamafisana ny rindranasa mihitsy amin'ny fiverenan'ny zavatra vita an-tsoratra araka ny filaharany.
Fampiharana Android tsy maintsy ananana ho an'ny mpianatra
Fampiharana Android 4 tsy maintsy ananana ho an'ny mpianatra. Jereo ity safidin'ireo rindranasa ity izay tena ilaina amin'ny mpianatra amin'ny fotoana maro. Afaka ihany koa izy ireo.
Ny fampiharana fisaintsainana sy fitadidiana tsara indrindra ho an'ny Android
Fampiharana fisaintsainana sy fisainana 4 ho an'ny Android. Jereo ity safidin'ireo fampiharana ity izay hanampy anao hiala sasatra mora amin'ny fanazaran-tena.
Google Assistant dia efa mamela anao handefa vola any Etazonia
Google Assistant dia mamela anao handefa vola eo anelanelan'ny mpampiasa. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao natolotry ny mpamosavy ho an'ireo mpampiasa any Etazonia.
Vaovao farany Telegram amin'ny kinova 4.8.5 miaraka amin'ny vaovao isan-karazany
Fanavaozana Telegram amin'ny kinova 4.8.5 ary mitondra fanatsarana maro. Fantaro misimisy kokoa ny fanatsarana tonga amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra amin'ity fanavaozana vaovao ity.
Tutorial video izay asehoko anao ny fomba fametrahana Xiaomi Mi Drop amin'ny Android sy ny fomba fampiasana azy handefasana sy handraisana ireo karazan-drakitra tsy misy tariby.
Tutorial video azo ampiharina izay asehoko anao ny fomba fametrahana ny rindranasa WhatsApp ofisialy amin'ny Android Tablet. Izany rehetra izany dia tsy mila mampiasa WhatsApp Web na tetika na mod.
YouTube dia te-hanana lisitry ny playlist amin'ny alàlan'ny fampisehoana doka misimisy
YouTube dia te-hanomboka hanome vola bebe kokoa ireo horonantsary mozika eo amin'ny lampihany, manampy doka bebe kokoa amin'ny lisitry ny lisitry ny mpampiasa.
WhatsApp dia ho tonga amin'ny Nokia 8110 vaovao sy ireo finday tsy finday hafa
Hanomboka amin'ny telefaona finday toy ny Nokia 8810 ny WhatsApp. Fantaro bebe kokoa ny momba ny fikasan'ny fampiharana fandefasan-kafatra handefa telefaona toy ny maodely Nokia vaovao.
YouTube dia manandrana manampy dikanteny amin'ny horonantsary autoplay amin'ny efijery an-trano amin'ny Android
YouTube for Android dia nanomboka nanandrana fiasa vaovao iray izay mampiseho aminay ny dikantenin-dahatsary amin'ny endrika lalaovina amin'ny efijery an-trano
Mpanampy Google ao amin'ny Wear OS dia efa miteny espaniola
Google Assistant, fantatra koa amin'ny hoe Google Assistant, amin'ny farany amin'ny teny Espaniôla amin'ny sehatra finday Wear OS, fantatra amin'ny anarana hoe Android Wear
[APK] Oneplus Weather ho an'ny Android rehetra
Tianao ve ny fampiharana ny toetr'andro amin'ny Oneplus Oneplus Weather?. Raha izany dia ho tianao ity lahatsoratra horonantsary ity rehefa mitondra anao seranan-tsambo miasa tanteraka ianao izay ahafahanao mametraka Oneplus Weather amin'ny Android anao, na dia misy aza ny Widget desktop miasa tanteraka
[APK] Oneplus Gallery, ny galeria Oneplus ho an'ny Android rehetra
Oneplus Gallery na inona no itovizany, ny Photo Gallery an'ny terminal Oneplus dia azo alaina amin'ny maodelin'ny terminal Android.
Google Play dia hamela anao hanova firenena mora foana
Google Play dia hamela anao hanova firenena mora kokoa. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao natolotra tao amin'ny magazay fampiharana hanovana ny firenenao raha nifindra tamina endrika vaovao ianao.
Ahoana ny fomba fiasa Memo haingana amin'ny Android rehetra
Te hanana ny fampandehanana Quick Memo mahazatra an'ny terminal LG ianao amin'ny marika sy maodelin'ny terminal Android? Raha izany dia sambatra ianao satria mitondra anao ny app Memo Quick tsara indrindra maimaimpoana.
Google Play Instant: Andramo ny lalao fa tsy sintonina
Google Play Instant dia hamela anao hanandrana lalao alohan'ny hisintomana azy. Fantaro misimisy kokoa momba ny hetsika Google vaovao natolotra tamin'ny hetsika iray tany San Francisco.
Ny sary 4D maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny Android
Te hanana endrika mampientam-po ve ny Android anao? Eto aho mitondra anao ny sary 4D maimaimpoana tsara indrindra, sary mihetsika efatra hety izay tianao.
Jereo ireo rindranasa ireo ho an'ny Android izay hanampy ny telefaoninao hamaky mafy ny hafatrao, ka tsy mila manao na inona na inona ianao ary ny telefaona dia hilaza aminao ny zava-drehetra.
Fampiharana Android hamantarana ireo zavamaniry
Jereo ireto rindranasa Android efatra ireto izay ilaina rehefa miresaka ny zava-maniry amin'ny fomba tsotra. Izy rehetra dia azo alaina amin'ny telefaona finday ao amin'ny Play Store.
Ny rindranasa tsara indrindra hahafantarana ny zava-drehetra momba ny tantara mitohy sy ny sarimihetsika
Jereo ireo rindranasa ireo izay hahafahanao ho tonga saina foana amin'ny zavatra rehetra misy fiatraikany amin'ny andian-tantara tianao na ny sarimihetsika tianao hojerena. Mora amin'ny findainao Android.
Eto aho avelako ianao alohan'ny hahatongavany amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Google Play Store, izay ilainao rehetra ary ny fomba fametrahana mba hahafahanao mankafy ny apk an'ny Playerunknown's Battlegrounds, ilay lalao mamely azy amin'ny Android. Dika iraisam-pirenena miaraka amin'ny maody lalao rehetra alefa.
Nahazo onitra ny WhatsApp sy Facebook noho ny tsy fanarahana ny lalàna momba ny fiarovana data
Nandoa onitra 600.000 Euros tao Facebook ny Facebook sy WhatsApp. Fantaro misimisy kokoa momba ny lamandy azon'ny orinasa roa eto amintsika noho ny tsy fanarahan'izy ireo ny lalàna momba ny fiarovana ny angona.
Ny fanavaozana ny Google Photos dia hanisy fanasongadinana vaovao amin'ny mpamoaka horonantsary
Manatsara ny mpamoaka horonantsary ny fanavaozana ny Google Photos. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana izay tonga amin'ny fampiharana izay manolotra fanatsarana ao amin'ny mpanonta video.
FC Barcelona - Chelsea maimaimpoana maimaimpoana amin'ity fampiharana manaitra ity hijerena sarimihetsika, andian-dahatsoratra, fahitalavitra ary baolina kitra maimaimpoana
Fampiharana mampihetsi-po hita ao amin'ny Google Play Store izay hahafahanay mijery an'i FC Barcelona - Chelsea maimaimpoana sy mivantana, ankoatry ny fahitana ireo sarimihetsika maimaim-poana, andian-tsarimihetsika, mozika maimaim-poana ary mazava ho azy ny fahitalavitra tsara indrindra ao amin'ny Google Play Store. malalaka koa izao tontolo izao.
Miezaha hanao ny Netease hiasa ho anao !!
Rehefa avy nampianatra anao ny fomba fametrahana ny Netease amin'ny teny espaniola amin'ny tutorial hafa aho ary nijanona tsy niasa intsony, izao dia entiko aminao ity hafetsena mampihetsi-po ity ahafahanao manao an'i Netease hiasa amin'ny fomba tena tsotra.
YouTube for Android manomboka maody maizina
Ny maody maizina dia ho tonga amin'ny YouTube ho an'ny Android amin'izao fotoana izao. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana izay entin'ity zava-baovao ity amin'ny fampiharana malaza mandritra ny andro.
[APK] Ahoana ny fametrahana ny Google Markup amin'ny Android P
Fampianarana an-tsarimihetsika izay itondranay anao ny fomba hametrahana Google Markup, fampiasa Android P manokana azonao atao amin'ny terminal Android anao.
Fampiharana sivana sary maimaim-poana
Lahatsary an-tsary izay anolorako hevitra anao sy hampianariko anao amin'ny fomba fampiasana fampiharana maimaimpoana mampihetsi-po hanampiana sivana amin'ny sary manana kalitao manaitra
Google Pay dia hampifandraisina amin'ireo mpifandray handefasana vola
Google Pay dia hampidirina miaraka amin'ny rindranasa fifandraisana. Fantaro misimisy kokoa momba an'io fampiasa vaovao io izay ahafahan'ny mpampiasa mandefa vola mora foana amin'ny mpifandray aminy.
Facebook Messenger dia manana endrika vaovao amin'ny fanavaozana azy. Fantaro misimisy kokoa momba ny fanavaozana izay tonga amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra izay manomboka mahatratra ireo mpampiasa.
Ny Play Store dia nohavaozina miaraka amin'ny fanovana eo amin'ny fitetezana
Ny Play Store dia nohavaozina miaraka amin'ny fanovana eo amin'ny fitetezana. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana ny fivarotana fampiharana izay manamaivana ny fanovana azy.
Lahatsoratra video vaovao izay itondrako anao ilay iray ho ahy no famenon-tsarimihetsika Android tsara indrindra ho an'ny mpilalao mozika na serivisinao mozika mivantana. Famenoana maimaimpoana tanteraka izay tena ilaina amin'ny terminal anao rehetra.
Fampiharana Android tsara indrindra hianarana Sinoa, Koreana na Japoney
Fampiharana Android 5 hianarana Sinoa, Koreana na Japoney. Fantaro bebe kokoa momba ireo rindranasa ireo ahafahanao mianatra ireo fiteny ireo izay mila fitandremana bebe kokoa sy fanampiana manokana.
Google Assistant dia tonga amin'ny takelaka misy Android 5.0 Lollipop
Google Assistant dia tonga amin'ny takelaka misy Android 5.0 Lollipop. Fantaro misimisy kokoa momba ny fahatongavan'ilay mpanampy ny orinasa amin'ny takelaka mampiasa ity kinova amin'ny rafitra fiasa ity
Fampiharana Android hahafantarana ny hafainganan'ny fandehan'ny fiaranao
Fampiharana Android hahafantarana ny hafainganan'ny fandehan'ny fiaranao. Fantaro misimisy kokoa momba ireo rindranasa ireo izay hilaza aminao ny hafainganan'ny fiara amin'ny fotoana rehetra ary misoroka anao tsy hihoatra ny fetran'ny hafainganana.
Ny fampiharana efatra tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ity fifantenana ity amin'ny fampiharana ara-batana efatra ho an'ny Android izay hanampy anao hanana endrika sy hanatsara ny toe-pahasalamanao sy ny endrika ara-batana amin'ny fomba tsotra.
Ny tetika Google Chrome tsara indrindra ho an'ny Android
Ny tetika Google Chrome tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ireto fika tsotra ireto hahafahanao misimisy kokoa amin'ny fampiasanao Google Chrome amin'ny findainao Android. Ankafizo ny tetika tsara indrindra amin'ny tranokala.
Fampiharana Android handaharana lahatsoratra amin'ny Instagram
Fampiharana Android handaharana lahatsoratra amin'ny Instagram. Fantaro misimisy kokoa momba ireo fampiharana ireo handaminana sy handrafetana ny lahatsoratra Instagram mora foana. Azo alaina amin'ny telefaona finday Android izao
[APK] Ahoana ny fomba fampidinana sy fametrahana ny Netease 2018 tsy misy Root. AH ary amin'ny Espaniôla !!
Lahatsary an-tsary asehoko anao ny fomba fampidinana sy fametrahana ny Netease 2018 amin'ny teny Espaniôla ary tsy misy terminal miorim-paka na fanarahana torolàlana azo ampiharina sarotra.
Facebook Messenger Lite dia hanasongadina antso an-tsary
Facebook Messenger Lite dia manolotra antso an-tsary. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao natolotry ny fampiharana fandefasan-kafatra maivana.
2 safidy hafa maimaim-poana Spotify
Video-post izay itondrako anao ireo safidy hafa maimaim-poana 2 ho an'ny Spotify, hanoloana ny tsy fiasan'ny mods toa ny Dogfood sy ny sisa.
Miaina traikefa Blackberry tanteraka amin'ny Android
Horonantsary izay anehoako anao ny fomba hiainana Blackberry iray manontolo amin'ny Android amin'ny alàlan'ny fametrahana ireo rindranasa Blackberry zanatany, Blackberry Launcher, Contacts, Messages, BBM, sns, sns ...
Hanolotra ireo naoty audio ihany koa ny Facebook. Fantaro bebe kokoa momba ny fiasa vaovao tonga amin'ny tambajotra sosialy izay hiteraka fanehoan-kevitra maro.
Fampiharana iray hafa tsy mampino amin'ny famokarana ny Smartphone na Tablet-nay
Satria tianao ny fampiharana an'io fomba io, androany aho dia mitondra fampiharana hafa tsy mampino ho an'ny famokarana ny terminal Android-nay, na io Smartphone na Tablet io.
Telegram dia tsy miasa amin'ny ankamaroan'ny Eropa
Telegram dia tsy miasa any amin'ny ankamaroan'ny Eropa noho ny olana tsy fantatra izay efa neken'ny orinasa amin'ny tambajotra sosialy toy ny Twitter
Torohevitra 4 hahazoana tombony betsaka amin'ny Google Keep. Jereo ireto fika tsotra ireto izay hahafahanao mampiasa ny fampiharana amin'ny fomba tsara indrindra.
Fampiharana Android tsara indrindra handaminana ny sary galerianao. Jereo ity fifantenana ity miaraka amin'ireo fampiharana tsara indrindra ao anatin'ny sokajy misy azy.
Ireo tovolahy ao amin'ny Microsoft dia nanambara fa manitatra ny fampifanarahana ny fampiharana Skype miaraka amin'ireo fitaovana miaraka amin'ny Adroid 4.0.3 sy Android 5.1
Ireo mpamaky PDF dimy tsara indrindra ho an'ny Android misy ankehitriny. Jereo ity fifantenana ity amin'ny mpamaky PDF tsara indrindra azontsika sintonina amin'ny Android ankehitriny.
Ny fampiharana tsara indrindra hanarahana ny vidin'ny cryptocurrency
Ny fampiharana tsara indrindra hanarahana ny vidin'ny cryptocurrency. Fantaro ireo rindranasa ireo ahafahanao manaraka ny vidin'ny cryptocurrency amin'ny fotoana rehetra.
Haingana lavitra noho ny an'i Chrome ilay tranokala Opera nohavaozina
Androany aho mitondra anao amin'ity karazana video mampitaha ity, ohatra iray amin'ny sary sy sary izay anehoako anao ny fomba fanahafana ilay browser Opera Web nohavaozina noho ny Chrome an'i Google. Mandrosoa, omeo azy ny volony !!!
Fampiharana izay tsy araka ny fahitana azy, amin'izao fotoana izao no radio ratsy indrindra eto an-tany
Miverina izahay miaraka amin'ny ampahan'ny fampiharana izay toa azy ireo amintsika, amin'ity indray mitoraka ity amin'ny endrika tsara satria hanolotra sy hanome sosokevitra fampiharana antsoina hoe The radio ratsy indrindra eto an-tany aho. Fampiharana iray izay tianao.
Sintomy ny apk avy amin'ny Twitter miaraka amin'ny fampiasa mba hamonjy entana ho hitanao ao aoriana
Sintomy ary apetraho ny apk Twitter miaraka amin'ireo fiasa mba hitehirizana entana hijerena azy any aoriana, fampiasa vaovao izay mbola tsy tafiditra ao amin'ilay kinova azonao sintonina avy amin'ny Play Store.
Hangouts Chat: ny fampiharana fandefasan-kafatra ho an'ny orinasa. Fantaro bebe kokoa momba ity fampiharana Google ity izay efa misy ao amin'ny Play Store.
Dragon Ball. ny sary an-tsaina indrindra, sary mihetsika, tantara an-tsary ary maro hafa
Horonantsary izay anehoako anao ny fomba fampidinana sary sokajy avo lenta amin'ny andiany Dragon Ball, tsara, sary an-tsary, feo ary fampandrenesana na fanairana, tantara an-tsary, sarimihetsika, sns, sns.
Ny fampiharana yoga tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ity fifantenana ity miaraka amin'ireo fampiharana tsara indrindra ampiasaina hampihatra yoga ao an-trano.
Ny safidy tsara indrindra amin'ny Swype for Android. Tadiavo ireto klavier dimy ireto izay afaka manolo tanteraka ny fampiharana Swype vao vita.
Ny sehatra virtoaly virtoaly an'i Google dia nivoaka tamin'ny beta ary tsy ho ela dia hifanaraka amin'ireo terminal maro an'isa.
Fampiharana mahandro tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ity fifantenana ity miaraka amin'ny rindranasa momba ny resipeo ho an'ny tsiro rehetra efa misy alaina amin'ny smartphone.
Ny rindranasa tsara indrindra hianarana mihira amin'ny Android. Fantaro misimisy kokoa momba ireo rindranasa misy ahafahana mianatra teknika sy manafana ny feonao.
Ny fanavaozana manaraka ny rindranasa Google Files Go dia ahafahantsika mandika mivantana ny atiny avy amin'ilay rindranasa mankany amin'ny Google Drive fa tsy mila manararaotra ny safidy fizarana rakitra.
Fampiharana hifehezana ny fampiasana ny findainao
Fampiharana 4 hifehezana ny fampiasana ny findainao. Jereo ireto rindranasa ireto izay manampy anao tsy ho andevozin'ny telefaona sy hampiasa andraikitra.
Fampiharana iray izay hahatonga ny Android anao hamokatra bebe kokoa. Maimaimpoana indray mandeha monja !!
Horonantsary izay anehoako anao fampiharana iray izay hahatonga ny Android anao hamokatra bebe kokoa, fampiharana izay mandritra ny ora vitsivitsy dia azonao atao ny misintona ilay kinova aloa maimaimpoana.
3D Sourround Music Player, mendrika ve ny mandoa efa ho 11 euro amin'ny fampiharana?
Famakafakana ny mpilalao mozika ho an'ny Android 3D Sourround Music Player, mpilalao iray azontsika andramana maimaim-poana mandritra ny 15 andro ary avy eo lafo sahabo ho 11 Euros. Fa mendrika handoa ireo efa ho 11 Euros ve izany?
Google Pay: Efa zava-misy ny fanavaozana ny Android Pay
Google Pay: Efa zava-misy ny fanavaozana ny Android Pay. Fantaro bebe kokoa momba ny rindranasa fandoavam-bola vaovao ho an'ny Android izay misy izao
Ny kitendry Swype malaza dia tsy tohanana intsony
Taorian'ny fanambaràn'i Nuance handao ny firoborobon'ny Swype keyboard, dia voatery mitady fomba hafa hanohizana ny fampiasana fihetsika amin'ny fomba tsotra isika rehefa manoratra.
Ahoana ny fandefasana WhatsApp nefa tsy mitahiry fifandraisana
Fampianarana tsotra azo ampiharina izay asehoko anao ny fomba fandefasana WhatsApp nefa tsy mitahiry ny fifandraisana amin'ny fandaharam-potoananay manokana, ny fahafantarana fotsiny ny nomeraon-telefaona olona tiantsika hifandraisana.
6,6% amin'ireo rindrambaiko Android no aloa
6,6% amin'ireo rindrambaiko Android no aloa. Fantaro bebe kokoa ny isan-jaton'ny ambany amin'ny rindranasa karama hitantsika ao amin'ny Play Store.
Ny fampiharana virtoaly virtoaly efatra tsara indrindra ho an'ny Android. Fantaro bebe kokoa momba ireo rindranasa ireo izay mampiasa zava-misy virtoaly amin'ny Android.
Ny fampiharana fanabeazana tsara indrindra ho an'ny ankizy amin'ny Android. Jereo ity fifantenana ity amin'ny fampiharana dimy izay manampy ny ankizy hianatra.
Fampiharana Android tsara indrindra hamerenana ireo rakitra voafafa. Fantaro misimisy kokoa momba ity fifantenana rindranasa ity izay ho hitantsika hamerenana ireo rakitra voafafa amin'ny Android.
Facebook dia manolotra fanatsarana ny serivisy vonjy maika ho an'ny voina
Facebook dia manolotra fanatsarana ny serivisy vonjy maika ho an'ny voina. Fantaro misimisy kokoa ny fanovana hataon'izy ireo amin'ity serivisy tena ilaina ity.
Fampiharana hijerena fahitalavitra amin'ny Android
Fampiharana dimy hijerena fahitalavitra amin'ny Android. Jereo ireto rindranasa dimy ireto ahafahantsika mijery fahitalavitra amin'ny telefaona Android.
Ny famindrana sary avy amin'ny fitaovana Android mankany amin'ny Windows 10 PC dia asa tena tsotra sy haingana noho ny fampiharana Microsoft vaovao antsoina hoe Photos Companion.
Mahatsiaro Android: Music Player 3 [APK]
Miverina ara-potoana izahay mba hitondra anao ilay mpilalao mozika 3 amin'ny endrika apk, izay iray amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra sy mpilalao mozika mahavariana indrindra ho an'ny Android.
Tsy misy App: Ilay rindranasa tsy manao na inona na inona ary efa misintona mihoatra ny 1 tapitrisa
Tsy misy App: Ilay rindranasa tsy manao na inona na inona ary efa misintona mihoatra ny 1 tapitrisa. Fantaro bebe kokoa momba ity fampiharana mahaliana ity izay malaza amin'ny Play Store.
Messenger Kids avy amin'ny Facebook tonga amin'ny Android
Ny fangatahana fandefasan-kafatra Messenger Messenger Facebook dia nanomboka ho hita eo amin'ny sehatra Android, na dia any Etazonia ihany aza izy io.
Tutorial video azo ampiharina izay asehoko anao ny fomba hananana ireo emulator sy lalao maimaim-poana hankafizanao amin'ny terminal Android anao.
Tsy hanohana an'i Jelly Bean intsony ny kinova Google Photos manaraka
Ny fanavaozana manaraka ny Google Photos dia tsy hifanaraka amin'ny Android Jelly Bean intsony, fa tsy hijanona hiasa amin'ny fitaovana taloha kokoa, toy ny andiany teo aloha. mbola ho hita eo ihany.
Ny fampiharana tsara indrindra hankalazana ny Andron'ny mpifankatia miaraka amin'ny vadinao
Tsy ny andron'ny mpifankatia ihany no eo, satria afaka manome fangatahana ho an'ny mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny kaonty ankohonana izay omen'i Google anay izahay.
Gmail Go: Tonga amin'ny Google Play ny kinova maivana amin'ny Gmail
Tonga amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Google Play ny Gmail Go. Fantaro misimisy kokoa momba ny kinova maivana an'ny Gmail izay misy ao amin'ny Play Store ankehitriny.
Ahoana ny fomba hamoronana fiarahabana amin'ny fetin'ny mpifankatia maimaim-poana
Dingana dingana fampianarana video izay ampianariko anao hamorona fiarahabana amin'ny fetin'ny mpifankatia maimaim-poana sy amin'ny fomba tena izy
Yiii, hevitra hafa fandefasana hafatra eo noho eo izay natao tany Espana
Yiii dia rindranasa iray izay manome antsika hevitra hafa tanteraka momba ny fandefasana hafatra eo noho eo noho izay efa fanaontsika amin'izao vanim-potoana izao, fampiharana izay mifototra amin'ny filaminana sy ny fifandraisana amin'ny tena izy eo amin'ny olona.
Ny fampiharana animoji tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana animoji telo tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ity fifantenana ity miaraka amin'ireo rindranasa tsara indrindra misy hamoronana animojis anao manokana
Ireo mpitety GPS tsara indrindra ho an'ny Android
Ireo mpitety GPS efatra tsara indrindra ho an'ny Android. Fantaro misimisy kokoa momba ity safidin'ireo mpitety GPS ity izay azontsika alaina amin'ny finday Android.
Ny fampiharana radio efatra tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ity fifantenana ity amin'ny alàlan'ny fampiharana radio tsara indrindra ao amin'ny Google Play.
VLC 3.0 izao dia misy miaraka amin'ny fifanarahana Chromecast sy vaovao maro hafa
Navoaka ny fanavaozana lehibe farany an'ny mpilalao VLC ary manolotra antsika ny mifanentana amin'ny Google's Chromecast ho zava-baovao indrindra.
Ny fampiharana tsara indrindra hanafarana sakafo ao an-trano
Ny fampiharana efatra tsara indrindra handefasana sakafo ao an-trano. Jereo ity fifantenana ity miaraka amin'ny rindranasa handefasana sakafo ao an-trano amin'ny telefaona Android.
Ny Mario Kart Tour andrasana dia ho maimaim-poana-hanomboka (maimaim-poana-hilalao)
Ny anaram-boninahitra lehibe manaraka izay kasain'ny Nintendo hanombohana eny an-tsena dia ny Mario Kart Tour, lalao izay hilalaovana maimaim-poana ary hampifangaro ny fividianana ao anaty rindrambaiko ary koa ny anaram-boninahitra farany natombony teny an-tsena.
Ny lahasa vaovao izay nampidirin'i Google Drive, ahafahantsika manampy hevitra amin'ny antontan-taratasy Office, sary ary amin'ny endrika PDF fa tsy mila manova ireo antontan-taratasy.
Ahoana ny fomba hampiorenana ny horonan-tsary amin'ny Android amin'ny fomba tena tsotra
Tutorial video azo ampiharina izay asehoko anao ny fomba hampiorenana ny horonantsary amin'ny Android amin'ny alàlan'ny fampiasana fampiharana tsotra izay manao azy amin'ny fomba mandeha ho azy tanteraka ary manome antsika valiny tsy mampino.
Google Calendar dia mahatratra 500 tapitrisa ny fisintomana
Google Calendar dia efa nanangona fisintomana 500 tapitrisa. Fantaro misimisy kokoa momba ny isan'ny fisintomana izay nahatratra ny fampiharana.
Google manatsara ny hotely sy ny motera fikarohana momba ny sidina ho an'ny Android
Google dia manolotra fanatsarana ny motera fikarohana momba ny dia ho an'ny Android. Fantaro bebe kokoa momba ny vaovao ampidirin'i Google ao amin'ny motera fitadiavany fialantsasatra.
Ahoana ny fomba fampandrenesana fampandrenesana avy amin'ny rindrambaiko misy fepetra, na dia eo aza ny efijery !!
Fampianarana an-tsary izay anazavako ny fomba fampandrenesana fampandrenesana avy amin'ny rindrambaiko misy fepetra, indrindra fa ilaina rehefa mitondra fiara ianao.
Telegram 4.8 dia atolotra vaovao manan-danja maro. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana ny fampiharana fandefasan-kafatra izay mamela antsika hanana vaovao isan-karazany.
[APK] Sintomy izao ny kinova vaovao an'ny Rootless Pixel Launcher No Root
Eto ianao manana ny apk ny kinova Rootless Pixel Launcher ho an'ny fisintomana sy fametrahana manual amin'ny Android 5.0 na ny avo kokoa.
3 mpandefa hafa samihafa ho an'ny Android
Eto ianao manana an'ity safidinao manokana an'ny mpandefa Launcher 3 samihafa ho an'ny Android ity. Mpandefa 3 tena samy hafa amin'ny tsirairay ary iza no manolotra antsika zavatra hafa sy hafa.
Ireo rindranasa dimy tsara indrindra hamonjy teny miafina amin'ny Android. Fantaro bebe kokoa momba ireo mpitantana teny miafina tena ilaina ireo.
Ilay mpandefa novidin'i Yahoo tamin'ny 2014, Aviate, dia hitsahatra tsy handray fanavaozam-baovao amin'ny 8 martsa amin'ity taona ity, araka ny notaterin'ny orinasa tao amin'ny bilaoginy.
Ny safidy tsara indrindra amin'ny Google Drive for Android. Zahao ireo rindranasa ireo mamela antsika hitahiry rakitra ao anaty rahona.
Ireo mpandika teny tsara indrindra ho an'ny Android
Ireo mpandika teny efatra tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ity fifantenana ity miaraka amin'ireo mpandika teny tsara indrindra misy amin'ny telefaona Android.
Ahoana ny fametrahana ny kapila mafy NTFS amin'ny Android amin'ny alàlan'ny OTG
Tutorial video azo ampiharina izay asehoko anao ny fomba fametrahana diska NTFS amin'ny Android hahafahanao mampiasa azy ireo amin'ny alàlan'ny fifandraisana OTG. Hard drive, PenDrives ary karatra fahatsiarovana voalahatra ao amin'ny NTFS.
Nahatratra firenena vaovao maherin'ny 130 ny YouTube Go
YouTube Go dia mandefa firenena vaovao maherin'ny 130. Fantaro bebe kokoa momba ny famoahana ny kinova maivana amin'ny fampiharana malaza any amin'ny firenena maro.
Rindrambaiko iray hihainoana radio amateur manerantany
Eto ianao dia manana fampiharana maimaim-poana ho an'ny Android izay hanampy anay hihaino radio amateur amin'ny Internet na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
Ahoana ny famindrana ny resakao WhatsApp avy amin'ny iPhone mankany amin'ny fitaovana Android
Raha nanapa-kevitra ny hanao ny dingana avy amin'ny iPhone mankany amin'ny Android terminal izahay, dia tsy olana ny famindrana resaka WhatsApp, na dia tsy manamora anay aza ny WhatsApp, amin'ny fitehirizana ireo rakitra amin'ireo mpizara samihafa.
Nintendo dia mamolavola 'Mario Kart Tour' ho an'ny finday
Nanambara i Nintendo fa mamolavola an'i Mario Kart Tour, kinova finday amin'ny lalao hazakaza-be malaza
Huawei Pay, ny sehatra fandoavan'ny marika dia ho avy tsy ho ela any Eropa
Huawei Pay dia miomana ny hiditra amin'ny fomba ofisialy any Eropa. Hijery misimisy kokoa momba ny fahatongavan'ny sehatra fandoavamboky ny marika sinoa.
[APK] Launcher Pixel vaovao miasa tanteraka tsy misy ROOT (Android 5.0 na avo kokoa)
Mod vaovao an'ny nwe Pixel Launcher hahafahanao mametraka azy amin'ny Android 5.0 na avo kokoa raha tsy manana terminal miorim-paka. Manazava ny fomba
Google Play dia hanampy anao hitahiry habaka amin'ny filazanao hoe apps inona no tsy ampiasainao
Mitsitsia toerana miaraka amin'i Google Play: Hilaza aminao izay rindranasa esorina. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao kasaina hampahafantarin'ny magazay app.
Aiza ny loharano tsy fantatra ao amin'ny Android Oreo sy ny fomba fametrahana apps am-pilaminana amin'ny Android
Tutorial izay hanoroako anao hoe aiza no misy ny fiaviany tsy fantatra ao amin'ny Android Oreo ary ampianariko anao ihany koa ny fomba fametrahana rindrambaiko soa aman-tsara
Fampiharana Android hijerena raha misy mifandray amin'ny WiFi-ko. Jereo ireo rindranasa ireo hijerena raha misy olona mifandray na tsy mahazo alalana amin'ny tambajotra WiFi-nao.
Nanambara ny vaovao hahatratra ny Google Maps. Fantaro misimisy kokoa momba ireo fiasa vaovao tonga amin'ny fampiharana malaza.
Ireo safidy dimy tsara indrindra mankany Shazam ho an'ny Android. Jereo ity fifantenana ity amin'ny fampiharana izay afaka manolo tanteraka an'i Shazam amin'ny fitaovana Android.
Ny fangatahana birao tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ny safidinay ny fampiharana birao tsara indrindra ho an'ny Android.
Bulletin: ny app Google anao hamaky tantara eo an-toerana
Google dia mamorona Bulletin, ny fampiharana hamaky tantara eo an-toerana. Fantaro misimisy kokoa momba ilay rindranasa vaovao izay efa andramana ataon'ny orinasa any Etazonia.
Ny mpitantana rakitra tsara indrindra ho an'ny Android
Ireo mpitantana rakitra dimy tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ity fifantenana ity miaraka amin'ireo mpitantana rakitra tsara indrindra azo ampiasaina amin'ny fitaovana Android.
Ahoana ny fomba fanapahana ny Facebook ny sakaizanao, ny namanao ary ny olom-pantatrao. Tandremo fa mora ny mamaky Facebook ary mahazo ny teny miafinao !!!
Fampianarana an-tsary tsotra izay anazavako ny fomba hack Facebook na ny fomba ahazoana ireo teny miafina hidirana amin'ny Facebook avy amin'ny namanao, olom-pantatrao ary fianakavianao.
Google Files Go dia nohavaozina ary manolotra endrika vaovao telo
Google Files Go dia nohavaozina miaraka amin'ny fiasa vaovao. Fantaro misimisy kokoa momba ireo fiasa vaovao izay entin'ny fampiharana antsika amin'ny fanavaozana azy.
Azo ampiasaina ao amin'ny Google Play izao ny audiobooks. Fantaro misimisy kokoa momba ny fahatongavan'ny audiobooks ofisialy ao amin'ny fivarotana app.
Harry Potter: Hogwarts Mystery dia misy ao amin'ny Google Play sy APK ankehitriny. Fantaro bebe kokoa momba ny fanombohana ny lalao Android vaovao miorina amin'ny saga malaza.
Hampandre koa ny Instagram raha manoratra ny efijery ianao
Hampandre ny mpampiasa ny Instagram rehefa manoratra ny efijery ianao. Fantaro misimisy kokoa momba ny fepetra vaovao izay ho tonga amin'ilay fangatahana atsy ho atsy.
Google Trips dia mampiseho horonan-tsary sy bilaogin'ireo tranonkala vangianao
Google Trips dia hampiseho anao horonan-tsary sy bilaogy avy amin'ireo tranonkala notsidihinao. Fantaro bebe kokoa momba ny fiasa vaovao tonga amin'ny fampiharana malaza.
Ny fampiharana 4 tsara indrindra amin'ny Android hifehezana ny fandaniana. Jereo ity fifantenana ity miaraka amin'ireo rindranasa izay hanampy anao hifehy ny fandaniana amin'ny fomba tsotra ary hahafahanao mitahiry.
Ny rindranasa dimy ratsy indrindra ho an'ny Android izay azonao sintonina. Fantaro bebe kokoa momba ity fifantenana ity miaraka amin'ireo rindranasa ratsy indrindra ho an'ny Android.
Ny fampiharana Microsoft tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana Microsoft 5 tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ity safidin'ireo rindranasa Microsoft azo alaina finday Android ity izao.
Fampiharana Android tena ilaina fa tsy fantatry ny mpampiasa
Fampiharana Android ilaina efatra nefa tsy dia fantatra loatra. Jereo ireto rindranasa Android ireto izay vitsy ny mpampiasa mahalala fa tena ilaina indrindra.
Azonao an-tsaina ve hoe inona no homena amin'ny WhatsApp? Vetivety angamba dia afaka manao izany ianao, WhatsApp Pay dia mety ho tonga amin'ny volana manaraka any India
Ahoana ny fananana ny Edge Launcher an'ny HTC U11 amin'ny Android rehetra
Eto aho dia mamela anao ny fomba tsotra hanana ny Edge Launcher an'ny HTC U11 amin'ny Android tsy misy Root na tsy mila manaraka fampianarana azo ampiharina sarotra na flashing.
Ny WhatsApp Business dia misy ao amin'ny Play Store ankehitriny
WhatsApp Business azo alaina ao amin'ny Play Store. Fantaro misimisy kokoa ny momba ny kinova ho an'ny orinasa, misy izao
Universale: teraka ny hoavin'ny boky fifandraisana
Universale: Ny ho avin'ny boky fifandraisana dia tena misy amin'ity rindranasa ity. Fantaro misimisy kokoa momba an'ity rindranasa ity izay mitady hanova ny fomba fandaminanao ny fifandraisana.
Handefa fampandrenesana ny Instagram rehefa maka pikantsary ianao
Hampandre anao ny Instagram rehefa maka pikantsary ianao. Fantaro bebe kokoa momba ny fepetra vaovao horaisin'ny tambajotra sosialy.
Fampiharana ho an'ny manadino indrindra izay hanampy anao betsaka
Fampiharana ho an'ny manadino indrindra izay hanampy anao be dia be, tsotra ampiasaina ary ampiasaina hamonjy izay rehetra tadiavinao ao amin'ny cloud Gmail anao amin'ny fomba tena tsotra.
Hamoaka maodely fanamoriana, fomba maizina ary fihetsika vaovao ny YouTube hialana amin'ny dokam-barotra [APK]
Nandritra ny taona maro, YouTube no hany sehatra ahafahantsika mahita izay horonan-tsary ...
Ny browser Microsoft Edge dia nohavaozina ho an'ny Android Oreo miaraka amin'ny vaovao mahaliana
Microsoft Edge dia nohavaozina ary mampiditra vaovao saro-pady nefa fanatsarana ho an'ny Android Oreo. Anisan'izany ny Adaptatives Icons an'ny kinova an'ity OS ho an'ny fampiharana ity, ary ny fanatsarana ny famakiana. Jereo!
Ny fampiharana tsara indrindra amin'ny Android handrefesana ny torimaso
Ny fampiharana 5 tsara indrindra amin'ny Android handrefesana ny torimaso. Fantaro misimisy kokoa momba ireo fampiharana ireo izay manampy anao handrefy ny torimaso.
Ireo rindranasa Android 5 tsara indrindra hanarahana ny baolina kitra avy amin'ny Play Store
Raha mpankafy baolina kitra ianao ary mitady rindranasa izay mitazona anao haharaka ny vaovao rehetra momba ity fanatanjahantena ity dia atolotray eto ireo fampiharana soccer tsara indrindra ho hitanao ao amin'ny Play Store.
Function izay tokony hananan'ny WhatsApp handresena ny Telegram
Fampisehoana 4 izay hanampy ny WhatsApp handresy an'i Telegram. Jereo ireto fiasa ireto izay hanampy ny fampiharana handresena ny mpifaninana aminy.
Fampiharana Android izay tsy tadidin'ny olona
Fampiharana Android 6 izay tsy tadidin'ny olona intsony. Jereo ireo rindranasa izay efa lasa tsy lamaody intsony ary tsy misy mahatadidy intsony.
Fanontaniana 5 hapetraka rehefa mamorona rindranasa
Inona avy ireo fanontaniana tokony hapetratsika amin'ny tenantsika rehefa mamorona fampiharana? Jereo ireto fanontaniana ireto izay hanampy anao rehefa mandrafitra fampiharana ianao.
Ny fampiharana fakantsary haingam-pandeha tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana fakantsary haingam-pandeha 5 tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ity fifantenana ity amin'ny alàlan'ny rindranasa radara tsara indrindra ho an'ny Android.
[APK] SoundCloud Music Mod mifanaraka amin'ny Viper4Android
Eto aho dia avelako ianao ary asehoko anao ny fomba fametrahana sy ny fiasa izay atolotry ny SoundCloud Music Mod apk ho antsika, ny fangatahana fihainoana mozika mivantana amin'ny endrika sosialy.
Samsung Copilot: ny fampiharana hisorohana ny faharendremana amin'ny kodiarana. Fantaro bebe kokoa momba ity rindrambaiko ity ho an'ny smartwatches novolavolain'i Samsung.
Ny fanambiko na tanjoko amin'ity taona 2018 ity dia ny an'ny maro hafa izay milaza na te hiala amin'ny sigara, iraka tsy azo tanterahina tsy misy finiavana, fanampiana na fomba iray mihitsy.
Ny fanavaozana ny WhatsApp dia ahafahantsika mihaino fanamarihana am-peo alohan'ny andefasana azy ireo
WhatsApp dia hamela anao hihaino naoty am-peo alohan'ny andefasana azy. Fantaro bebe kokoa momba ity zava-baovao ity izay ho tonga miaraka amin'ny fanavaozana ny fampiharana.
Ahoana ny fomba famoronana bokotra amin'ny Telegram amin'ny fampiasana QuickSilver
Tutorial video azo ampiharina izay asehoko anao ny fomba famoronana bokotra amin'ny Telegram amin'ny fampiasana bot QuickSilver. Mamorona hafatra mahafinaritra miaraka amin'ny bokotra sy fihetsika.
Mitombo ny fampidinana ao amin'ny Google Play Store fa mahazo tombony ny App Store
Play Store vs App Store: Ireo tarehimarika ofisialy ho an'ny 2017. Jereo bebe kokoa momba ny angona ofisialin'ny magazay fampiharana amin'ny 2017.
Miombona Android Pay sy Google Wallet: teraka i Google Pay
Miaraka ny Android Pay sy Google Wallet ary teraka i Google Pay. Fantaro bebe kokoa momba ity fampiharana vaovao ity izay nateraky ny firaisan'izy roa.
Google Allo dia tsy nampisy liana firy tamin'ireo mpampiasa
Tsy liana amin'ny Google Allo ny mpampiasa. Fantaro bebe kokoa momba ny tsy fahampian'ny lazan'ny mpampiasa amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo.
Hetsika hahazoana tombony betsaka avy amin'ny Google Assistant
Tetika 5 hahazoana tombontsoa betsaka avy amin'ny Google Assistant. Fantaro misimisy kokoa momba ireo tetika ireo izay ahafahanay manararaotra ny Google Assistant.
Fika 3 hahazoana ny ankamaroan'ny Spotify amin'ny Android. Jereo ireto fika tsotra ireto hametrahana ilay fampiharana malaza hampiasaina tsara kokoa.
Ireo rindranasa 5 tsara indrindra hihainoana podcast amin'ny Android. Jereo ity fifantenana ity miaraka amin'ireo fampiharana tsara indrindra amin'ity karazana ity ho an'ny Android.
Ny fampiharana sakafo hariva maivana indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana sakafo hariva maivana tsara indrindra amin'ny Android. Fantaro bebe kokoa momba ireo rindranasa ireo izay hanampy anao aorian'ny Krismasy.
Fampiharana Android tsara indrindra hamoronana fampahatsiahivana
Ny fampiharana fampahatsiahivana 5 tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ity safidin'ireo fampahatsiahivana fampiharana efa misy ity.
Fampiharana hanatanterahana ny fanapahan-kevitry ny Taombaovao
Fampiharana Android 6 hanatanterahana ny fanapahan-kevitry ny Taombaovao. Hihaona amin'ireo tanjona rehetra napetrakao ireo tanjona kendrenao ireo.
Nandritra ny alin'ny Taom-baovao dia 75.000 tapitrisa ny hafatra nalefa tamin'ny alàlan'ny WhatsApp
Araka ny lazain'ny sehatra fandefasan-kafatra, nandritra ny alin'ny Taom-baovao lasa izay, WhatsApp dia nandresy ny rakitsoratra nataony teo aloha izay nisy hafatra 55.000 tapitrisa nalefa
Ny fampiharana DJ dimy tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ity safidin'ireo rindranasa ity ho tonga DJ tsara indrindra azo alaina amin'ny Android ankehitriny.
Ny fampiharana Android tsara indrindra hiarahabana ny Taom-baovao
Ny fampiharana Android 5 tsara indrindra hiarahabana ny Taom-baovao. Fantaro misimisy kokoa momba ity safidy fampiharana ity izay hiarahabana ny namana sy ny fianakaviana.
Fampiharana Android ka tsy mila mitondra ianao amin'ity alin'ny Taom-baovao ity
Fampiharana Android 4 tsy hampiasa ny fiara amin'ity alin'ny Taom-baovao ity. Jereo ireo rindranasa izay tsy mila mitondra fiara.
Fa maninona isika no mahita sarin'ireo mpampiasa tsy narahina tao amin'ny Instagram?
Gaga ny mpampiasa Instagram amin'ny alàlan'ny vaovao, ankehitriny ny fampiharana dia manolotra boky sy gazety mitondra ny lohateny "Recommended for you" mifototra amin'ny publication izay tianay
Ny fampiharana tsara indrindra hamaritana ny abs amin'ny Android
Ny fampiharana abs telo tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ny rindranasa tsara indrindra izay hanampy anay hamaritra ny abs.
Ireo rindranasa efatra tsara indrindra handraisana ny efijery amin'ny Android. Jereo ity fifantenana ity miaraka amin'ireo rindranasa tsara indrindra mamela antsika hanoratra ny efijery finday.
Ny fampiharana efatra tsara indrindra amin'ny fampiharana amin'ny Android. Fantaro misimisy kokoa momba ity fifantenana fampiharana azo alaina amin'ny Android ity.
Ny Google Photos, raha tsy fantatrao, dia manome anay ny safidy hizarana ny fitahirizam-bokinay, na ny fampirimana voafantina amin'izay tianay, jereo ny fomba hanaovana azy.
Ny poketra Bitcoin tsara indrindra ho an'ny Android
Ireo poketra Bitcoin telo ho an'ny Android. Jereo ity fifantenana poketra misy ny cryptocurrency malaza izao izay hita ao amin'ny Play Store.
Lisitry ny lalao maimaimpoana maimaimpoana nohavaozina mandritra ny fotoana voafetra ao amin'ny Google Play Store. Lisitra nohavaozina tamin'ny datin'ny fahamarinan'ny tolotra.
Ampidino izao ny fampiharana ofisialin'ny Androidsis Community
Atolotray anao ny fampiharana vaovao an'ny Androidsis Community, toerana tokana hamakiana ny vaovao rehetra sy ny podcast
Instagram dia mamela anao handefa horonantsary mivantana ho hafatra mivantana
Afaka mandefa horonantsary mivantana amin'ny hafatra mivantana amin'ny Instagram ianao izao. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao natolotry ny fampiharana.
Ahoana ny fomba hijerena ny valin'ny Loteria Krismasy
Raha te hahafantatra haingana ianao raha nanana tavy Krismasy dia asehonay anao ny fampiharana tsara indrindra hanaovana izany.
Afaka manana 2 volana maimaim-poana amin'ny Amazon Music Unlimited isika amin'ny alàlan'ny fanakaramana ny drafitry ny fianakaviana tsy misy fanoloran-tena.
Tena vahaolana ve ny Datally avy any Google hitehirizana ny angona amin'ireo terminal Android misy antsika araka ny nampanantenain'ireo avy ao Mountain View?
Android Pay dia mifanaraka amin'ny karatra Openbank ankehitriny
Android Pay dia azon'ny mpanjifa Openbank. Fantaro bebe kokoa momba ny fahatongavan'ilay sehatra fandoavam-bola ho an'ny mpanjifan'ny banky.
Fampiharana manaitra izay mamela antsika, ankoatry ny zavatra maro hafa, hampidina horonantsary avy amin'ny YouTube, Facebook, Instagram ary tranonkala maro hafa.
Chrome 64 dia hanakana ny pop-ups sy ny horonan-tsarimihetsika mandrehitra tena
Chrome 64 dia ho avy miaraka amin'ny pop-up blocker amin'ny fanavaozana azy. Fantaro misimisy kokoa momba ny vaovao ho entin'i Chrome 64 aminay.
Top 10 Apps 2017 ho an'ny Android. Jereo ity lisitra ity miaraka amin'ireo rindranasa tsara indrindra misy ankehitriny ho an'ny fitaovana Android.
Azonao atao izao ny misintona ny Nova Launcher amin'ny € 0,50 mandritra ny andro vitsivitsy
Iray amin'ireo mpandefa tsara indrindra izay hitantsika amin'izao fotoana izao amin'ny Android, Nova Launcher dia misy mandritra ny fotoana voafetra amin'ny 0,50 euro ihany.
Ahoana no hahafantarana raha simba ny tontonana findain'ny findaiko
Fomba efatra hahafantarana raha simba ny tontonana mikasika ilay finday. Jereo ireo fomba hahafantarana raha tsy mandeha ny tontonana finday.
Fomba handaozana vondrona WhatsApp
Fomba 4 ahafahana mamela vondrona ao amin'ny WhatsApp. Jereo ireo fomba ireo hivoahana amin'ny vondrona ao amin'ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza.
Instagram manampy sticker, effets Superzoom ary sivana vaovao amin'ny Krismasy
Sivana, sticker ary ny vokan'ny Superzoom amin'ny fanavaozana ny Instagram. Fantaro bebe kokoa momba ny fanavaozana ny fampiharana malaza.
Ny fampiharana ny hira Krismasy tsara indrindra ho an'ny Android
Ny fampiharana telo hira Krismasy tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ity safidin'ireo fampiharana azontsika sintonina izao.
Sintomy ny Firefox Rocket, angamba ilay tranokala haingam-pandeha ho an'ny Android
Eto ianao manana ny apk hanintonana ny Firefox Rocket, ilay mpizaha tranonkala izay avo telo heny noho ny Google Chrome ary manampy anay hitahiry angona fizahana.
Voamarina: tsy ara-dalàna ny manampy olona amin'ny vondrona WhatsApp
Tsy ara-dalàna ny fametrahana olona ao anaty vondrona WhatsApp. Fantaro bebe kokoa momba ity vaovao ity izay mampiseho ny antony tsy ara-dalàna izany asa izany.
Google Maps Go: Misy ny kinova maivana amin'ny Google Maps. Fantaro misimisy kokoa momba an'ity kinova vaovao an'ny fampiharana izay misy ao amin'ny Google Play ity izao.
Izany no ahy ny rindranasa izay hanampy anao hamerina ny zavatra nindraminao
Fampiharana vaovao manaitra ho an'ny Android izay hanampy anao hamerina ny zavatra nindraminao, toa ny fihainoanao azy.
Ny fahana Tinder vaovao dia mamela anao hampiseho ny hafatrao Instagram
Ny feed Tinder vaovao dia mifangaro amin'ny Instagram. Fantaro misimisy kokoa momba an'io fampiasa vaovao io ao amin'ny Tinder izay tadiavin'izy ireo hamerenana ireo mpampiasa.
Miaraka amin'ny FinScore, afaka mahafantatra mora foana isika fa sarobidy amin'ny banky
Homena anao ve izany indram-bola, trosa na trosa ilainao izany? Jereo miaraka amin'ny FinScore, ilay fint Fintonic vaovao ho an'ny findainao. Andramo io
WhatsApp dia hitondra antso anaty vondrona sy safidy maro hafa ho an'ny mpitantana
Jereo ny vaovao tonga amin'ny WhatsApp amin'ny beta. Fantaro bebe kokoa momba ny vaovao izay entin'ny beta an'ny fampiharana.
Shazam lasa ampahany amin'ny Apple
Taorian'ny faran'ny herinandro teo ny tsaho, Apple dia nanamafy ny fividianana an'i Shazam 400 tapitrisa dolara mahery.
Hampandre anao ny Google Maps rehefa tsy maintsy miala amin'ny fitateram-bahoaka ianao
Google Maps dia hilaza aminao amin'izay fijanonana tokony hialanao. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao ho avy tsy ho ela amin'ny fampiharana.
Google Play dia hampiditra sivana amin'ny fikarohana
Google Play dia hanolotra sivana amin'ny fikarohana. Fantaro misimisy kokoa momba ilay fiasa vaovao tonga ao amin'ny fivarotana app.
Ireo rindranasa telo tsara indrindra hanovana feo amin'ny Android. Jereo ireto rindranasa ireto hanovana feo amin'ny Android amin'ny fomba tsotra.
Ny safidy tsara indrindra ho an'ny Passbook for Android. Jereo ity fifantenana ity amin'ny alàlan'ny fomba hafa tsara indrindra ho an'ny Android mankany amin'ny Passbook.
Fampiharana Krismasy tsara indrindra ho an'ny Android
Fampiharana Krismasy tsara indrindra ho an'ny Android. Jereo ny safidinay amin'ireo rindranasa tsara indrindra hahandro amin'ity Krismasy ity.